अब नगर बसमा पुरुष होइन महिला कन्डक्टर हुने ! – Etajakhabar
अब नगर बसमा पुरुष होइन महिला कन्डक्टर हुने !
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले खरीद गरेको नगर बस अबका केही दिनमै सडकमा गुड्ने भएका छन् । यसका लागि बाँकेका विभिन्न ‘रुट’मा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । स्थानीय तह आफैँले बस सञ्चालन गर्न लागेको सम्भवत यो नयाँ हो । त्यसमा पनि अझ सञ्चालनमा आउन लागेको बसमा परिचालक ‘कन्डक्टर’ महिला हुने छन् । काठमाडौँका चल्ने सवारीसाधनमा महिला चालक र परिचालक देखिने भए पनि मोफसलमा सम्भवत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक यो काम शुरु गर्न लागेको हो ।
प्रमुख राणाले भन्नुभयो, “अहिले परिचालक नै पछि गएर चालक बन्न सक्छन् । उहाँहरु परफेक्ट भए पछि विस्तारै चालक, परिचालक नै महिला राख्ने हो ।” उपमहानगरपालिकाले परिचालकका लागि आवेदन माग गरी अन्तर्वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको छ । मधेशी, मुस्लिम, जनजाति महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
“कुनै बेला आफ्नो गाडीको चालकका रुपमा महिला राखेका थिए । त्यसबेला महिलाले गाडी चलाएको देख्दा अनौठो मानिन्थ्यो”, प्रमुख डा राणाले भन्नुभयो, “अहिले ती बहिनी एउटा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा चालक छन् ।” महिलालाई अवसर दिने हो भनेजस्तो पनि काम गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी शरद पौडेलले नगर बस सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधि तयार भइसकेको छ । बसका टिकट छपाइ पनि सकिएको छ । महिला कण्डक्टर नियुक्तिका लागि लिइएको परीक्षाको नजिता पनि केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । नतिजा आएपछि बस सञ्चालनमा आउँछन् ।”सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार असोज पहिलो साताभित्रै नगर बस सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ ।
Posted on: Wednesday, September 11, 2019 Time: 14:10:53
लकडाउनमा काठमाण्डौ उपत्यकामा घटेको यो अचम्मको घटना, ‘उनीहरुले लाजै मानेनन् र बोकेर हिडे’ सबैलाई सोच्न बाध्य बनायो !
न घर छोडे, नत विदेशबाट फर्केका कसैलाई भेटे नै, तर पनि भए कोरोना संक्रमित
सशस्त्रका एसपीको रगतले सुत्केरीको बच्यो ज्यान
कोरोना संक्रमित ९४ वर्षीया बृद्धा निको भएर घर फर्किइन्, उपचारको क्रममा यसो भन्दै थिइन् !
झापामा दिनहुँ २८ जनाभन्दा बढी ज्वरो आएका र रुघा लागेका विरामी भेटिन थाले !
इतिहाँसमै पहिलोपटक चैतेदशैँ बन्यो अचम्मको !
बाजुरामा रुघाखोकीले तीन सय परिवार प्रभावित, थला परेपछि सहयोग गर्ने मान्छेसमेत गाउँमा भेटिन छाडे !
सङ्क्रमित युवतीलाई घरसम्म पु¥याउने चालकको पहिचान
-19784 second ago
-14231 second ago
-13164 second ago
-12617 second ago
-8881 second ago
-7980 second ago
ज्वरो देखिएपछि ठूला अस्पतालले हेरेनन्, डुलाउँदा-डुलाउँदै ५२ वर्षीया नरदेवी गुरुङको निधन
-6596 second ago
-5730 second ago